Ukuhlala kabusha ngo-Investment for France naseGolden Visa
Sinikezela Ngosizo Lwezokufuduka Komnotho eFrance ngo:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance
● Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eFrance
● I-visa yegolide eFrance
● Iphasiphothi yesibili evela eFrance
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance ngokutshala imali ku-real estate
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eFrance kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngo-Investment eFrance kanye nabathengisi bezinhlelo zokuhlala kabusha eFrance basebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezezimali eFrance kunikela ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eFrance, ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eFrance, ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eFrance, ukuhlala okwesibili ngokutshalwa kwezimali eFrance, ukuhlala kabili ngokutshalwa kwezimali eFrance, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshalwa kwezimali eFrance , Ukuhlala unomphela ngokutshala imali eFrance, Ukuhlala okwesikhashana ngokutshala imali eFrance, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eFrance, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eFrance, Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eFrance, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eFrance, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eFrance, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eFrance, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali eFrance, ukuhlala nobuzwe ngokutshala imali eFrance, ukuhlala nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eFrance, izinhlelo zezomnotho eFrance, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eFrance, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eFrance, okwesibili ipasipoti eFrance, izinhlelo zesibili zepasipoti eFrance , uhlelo lwesibili lwephasiphothi eFrance, ipasipoti yesibili eFrance, yokuhlala kanye nepasipoti yesibili eFrance, ipasipoti yesibili yezombusazwe eFrance, ipasipoti yesibili ngokutshala imali eFrance, ipasipoti yesibili yobuzwe eFrance, uhlelo lwesibili lwamaphasipoti eFrance, izikimu zepasipoti zesibili eFrance , i-visa yegolide eFrance, ama-visa egolide eFrance, izinhlelo ze-visa zegolide eFrance, uhlelo lwe-visa yegolide eFrance, i-visa yesibili yegolide eFrance, uhlelo lwesibili lwe-visa eFrance, ama-visa amabili egolide eFrance, ubuzwe kanye ne-visa yegolide eFrance, indawo yokuhlala kanye ne-visa yegolide eFrance, isakhamuzi segolide se-visa eFrance, uhlelo lwe-visa yegolide eFrance, izikimu ze-visa zegolide eFrance.
"1 stop solutions" yakho yonke i-Residency yakho ngokutshala imali eFrance ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane eFrance Kokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali: EUR 10,000,000
Isingeniso France kanye Residency by Investment
IFrance ingelinye lamazwe athandekayo futhi acwengisiswe kakhulu eYurophu. Umkhathi omangalisayo, ukudla okumangazayo, namasiko okugxila kuwo. Uma kungenzeka ukuthi ithuba lokubona i-Eiffel Tower usuku ngalunye futhi uzwe iwayini elinambitheka ngokungakholeki nge-euro / ibhodlela elingu-3 kuphela, azikho izizathu eziningi ezenza ukuhlala eFrance kumangalise kakhulu. Yize isonto lomsebenzi lamahora angama-35, ngisho nangaphezulu, liyinganekwane, kuneqiniso, amaFrance abona ukuthi angagcina kanjani ibhalansi yempilo / yomsebenzi efanelekile. Esinye sezizathu zokuvala izitolo nabaphathi ngo-7 ebusuku kakhulu, ukuthi abasebenzi bajabulele isidlo sakusihlwa nomndeni emuva ekhaya.
Izinzuzo eziningi: isidlo sasemini sehora, esikhokhelwa kakhulu yinhlangano njengamakhuphoni okudla kwakusihlwa ku-brasserie esiseduzane. Futhi, impela, akukho lutho olubi ngokuba nengilazi yewayini nokudla kwakho bese ubuyela ebhizinisini ngemuva kwalokho. AmaFrance anezinsuku ezingama-30 zohambo olukhokhelwayo, aqala ukuqoqa lapho eseqashiwe. Ngokwengeziwe, banaka ukuvakasha futhi badlule ezinsukwini ezingama-30 ezingaphandle kwendawo yokusebenza minyaka yonke kodwa basazizwa bebalekelwa ngaphambi konyaka. Ngaphezu kwalokho, akunandlela, ukuma noma ifomu, ungahleleli ukwenza izinto ngo-Agasti! Uzophinde uqondiswe kabusha ngokuqala nge-autoresponder eyodwa bese ulandela okulandelayo. Ngempela, wonke umuntu ungukuhamba okude, okushisa kakhulu ilanga endaweni ethile eNyakatho Corsica.
Umthetho waseFrance owenqabela abamele ukuphequlula imilayezo yomsebenzi ngemuva kuka-6 ntambama wenze ukukhathazeka okukhulu ngewebhu. Yize kwahlulelwa kabi kakhulu, bekungafanele ucabange ukuthi labo ohamba nabo baseFrance kufanele batholakale ngaphandle kuhlelo lwabo lwezikhathi abasebenza ngalo. AmaFrance angongoti ekuhlukanisweni futhi akhethe ukutshala amandla awo mahhala ngaphandle - ukukhuphuka, i-kayaking noma ngokuvakasha ezweni elivulekile. Ungathola i-BA yakho noma i-BS ngo- € 181 (225 $) minyaka yonke bese ukhetha izivivinyo zangemva kokuthweswa iziqu ze- € 250 (310 $) ngonyaka! Ukuklama izikole kuyabiza kakhulu nge-smidgen ngezindleko zemfundo zaminyaka yonke ze- € 596 nokuthola i-Ph.D. eFrance kuzokubiza u- € 380 ngaso sonke isikhathi sezifundo. Amanyuvesi azimele (ucabanga umthetho nezikole zemitholampilo) abiza kakhulu, noma kunjalo, asesezingeni elilinganiselwe ngezindleko ezisuka ku- € 3.000 ziye ku- € 10.000 minyaka yonke.
Ngokwengeziwe, kunenqwaba yezibonelelo ezifinyeleleka kubafundi abangajwayele ukukusiza ngokufihla izindleko zakho zokuphila. Ngaphandle kokudlula ngokweqile, ungaba nesifundo esiphansi isikhathi eside eFrance, usebenzise cishe ama-700-800 € njalo ngenyanga kufaka konke.
Ama-bums olwandle angakujabulela ukufaka ilanga kunoma iyiphi indawo ezungeze iCote d'Azur (futhi ngokufihla ngidinga ukuhlangana nothile odumile). Ngempela, amanzi afudumele lapha angowokufiphaza okufana nalokho okubonayo ezithombeni. Noma-ke futhi okungcono, shaya eCorsica kule ntwasahlobo - ulwandle oluvalekile nezintaba ezingcolile kuyo yonke indawo yebhodi. Amachibi olwandle lapha angcono kakhulu kunaseFrance Reverie futhi ngiphakamisa ngokweqiniso ukwenza ukuchezukisa okuzungeze lesi siqhingi ukuze kube nokuhlangana okuhle kakhulu okuvulekile! Ummango wesihlabathi omkhulu kunayo yonke eYurophu - iDune of Pilat imane nje ibe ngamakhilomitha angama-60 ukusuka eBordeaux. Ama-Icy mass - kunjalo, kune-7 etholakala eFrance. Uthanda ukuba namandla ohambweni? Kuthiwani nge-kayaking eGorges du Tarn noma ukukhuphuka uzungeze iGorges du Verdon - ngokusobala, indawo enhle kakhulu yaseYurophu.
Inani elikhulu kakhulu lokunakekelwa kwezingane kanye nokuphathwa kwangaphambi kokufundiswa kumbozwe ngokuphelele yisiphathimandla somphakathi. Kukhona izabelo ezingajwayelekile zokunakekelwa kwabantwana emakhaya kanye nezinzuzo ezihlukile zokuthola izingane ezingaphezu kweyodwa - kusuka emalini eyengeziwe yokwehlisa ukuhlolwa kanye nemikhawulo ebalulekile yokuhamba. Abesifazane banxuswa ukuba bathathe amaqabunga okubeletha futhi bathole isinxephezelo sabo esingangezinyanga ezine. Obaba ngokufanayo bangathatha isikhathi esingangezinsuku eziyi-11 zekhefu lobaba ngaphandle kokushoda kweholo. Isiphathimandla somphakathi ngokungeziwe sikukhokhela kuze kufike ku- € 1 846.15 uma kwenzeka uthanda ukuthanda ingane. Empeleni, njengentokazi unesinqumo esishubile okufanele usenze: hamba uye emsebenzini ulethe u-1.500-2.000 euro inyanga nenyanga ukhokhe noma uhlale ekhaya, konakalise izingane zakho zize zithole ama-20 bese zizungeza i-1.200 euro yalokho. Njengamanje, besifazane, yini ongayikhetha?
Ikhadi lokuhlala laseFrance lijoyina i-carte Vitale - ukudlula kwakho endaweni yonke yemithi yokukhokha, udokotela onesizotha (noma wamahhala) wemithi, kanye nokuhlolwa kwamahhala kwemitholampilo ongakufuna inyanga ngayinye. Nyanga zonke isilinganiso sezinga liyasuswa esinxephezelweni sakho bese siyiswa esitolo sakho sezokwelapha, ngenhloso yokuthi ungavakashela udokotela wakho weGP ngeze. Uma ungena esibhedlela, inkokhelo enkulu ongalindelwa ukuthi uyikhokhe yi-18 € nsuku zonke.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweFrance
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance
I-visa yebhizinisi losomabhizinisi / imvume yokuhlala okwesikhashana evumelekile iminyaka emi-2 (evuselelwa ngemuva kwalokho)
Icubungula isikhathi sokuhlala ngokutshalwa kwezimali eFrance
Ngemuva kweminyaka eyi-10 yokuphila ngokusemthethweni.
Ubuzwe obubili buvunyelwe izakhamizi zaseFrance
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eFrance
Kungani kufanele ube yi-Residency ngokutshala imali eFrance
Uhlelo lokuhlala lwegolide laseFrance luhloselwe abantu abanenethiwekhi esezingeni eliphakeme. Ngokwethula inani elimisiwe lemali, wena nomndeni wakho nizothola imvume yokuhlala iminyaka eyishumi, nijabulela okulingana neFrance. Endaweni yaseSchengen, uzokwazi ukufinyelela ngqo ekunakekelweni kwezempilo okusezingeni eliphakeme, amathuba emfundo esezingeni lomhlaba, nama-visa wokungena agcwele. Le nqubo yizinyanga ezi-10 kuphela, futhi ayidingi noma yisiphi isipiliyoni sokuphatha, ukuhlala kuqala eFrance, amakhono olimi noma amakhono omzimba, uma kudingeka.
Ukufuduka komndeni eFrance
Ungafaka ngokushesha amalungu omndeni wakho kuhlelo lwakho lokusebenza ngaphandle kwezindleko ezingeziwe. Ohlelweni lwakho lwaseFrance, oshade naye nezingane ezincane zifanelekile.
Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eFrance
Inqubo yokufaka isicelo ithatha izinyanga ezi-2 kuphela emva kwalokho wena nezihlobo zakho nithola imvume yokuhlala iminyaka eyishumi. Awunakho okuhlangenwe nakho kobuholi bangaphambilini, amakhono olimi, noma izihlalo zangaphambilini eFrance. Ngaphandle kwalokho, ngeke kudingeke uhlale eFrance ngemuva kokuthola imvume.
Izidingo zezezimali zeFrance
Utshalomali lungenziwa lodwa, ngokuhlanganyela nabangane noma ophathina, noma njengengxenye yohlelo lokutshala imali olwamukelwe iziphathimandla.
Abangenayo kumele batshale okungenani ama-euro ayizigidi eziyi-10 kuzimpahla zezimboni noma ezentengiso eFrance. Ungatshala imali ngokwakho noma ngenkampani okungenani enamasheya angama-30%. Ukutshalwa kwemali okungeziwe akudingeki ukuheha amalungu omndeni.
Ukuthola imvume yokuhlala akusho ukuthi uba yisakhamuzi saseFrance. Uma uchitha isikhathi sakho esiningi uphuma eFrance, umholo wakho womhlaba wonke uzohlala ungakhokhiswa intela futhi kuzosetshenziswa kuphela inzuzo oyitshalile eFrance.
Ukusekelwa kwamakhasimende kwe-Residency ngokutshala imali eFrance
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala ngama-Investment Agents eFrance futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli eFrance inikeza amaklayenti nemindeni yawo eFrance ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eFrance, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eFrance namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eFrance noma i-Golden Visa evela eFrance noma ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eFrance noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshalwa kwezindlu kuFrance, sinikeze isisombululo esigcwele uma ufuna ukusungula inkampani IFrance noma ulwandle, izinsiza zabantu eFrance nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezisuselwe ekubeni yisakhamuzi eFrance nasendaweni yokuhlala yesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi ZaseFrance:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali yeFrance, ngokuthenga kwethu okungabizi ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika OkweFrance, abasebenzeli bezimali zokufuduka abafinyelelekayo baseFrance, abangahlala ezindaweni ezingabizi ngabathengi bezotshalomali baseFrance, abahlali abambi eqolo ngabameli bezokutshalwa kwezimali baseFrance kanye nenkampani yababizi bokufika engabizi
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kusuka eFrance kuya emazweni angama-37.
I-visa yegolide eFrance emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kusuka eFrance kuya emazweni angama-37.
Iphasipoti yesibili esuka eFrance iye emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa eFrance kuya emazweni we-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela eFrance.
Izinhlelo ze-Golden visa eFrance ziya emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezisuka eFrance zaya emazweni angama-37.
Izinhlelo zepasipoti zesibili ezisuka eFrance ziya emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe zisuka eFrance ziya emazweni angama-106.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweFrance ngeReal Estate
Sinikeza ukusekelwa kokutshalwa kwezindlu eFrance ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwezimali eFrance, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala imali eFrance. Sinezibopho nabathuthukisi bezindawo ezimbalwa eFrance abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle eFrance, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezinhle kakhulu zokuhlala eFrance ngokutshalwa kwezimali kwempahla eFrance.
Udinga ukwazi - France Residency by Investment
Ukuhlala kabusha nguMmeli Wotshalomali eFrance kuzohlinzeka ngosizo lwemibhalo oluningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali eFrance. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eFrance zifaka:
Abameli bethu bazoqonda izidingo zakho zokufuduka eFrance noma eFrance, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance kumakhasimende ngokuthola i-Residence Permit yaseFrance nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala waseFrance, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutshala imali eFrance sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngesicelo sokutshala imali eFrance Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali eFrance ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho nje imibhalo yakho neyomndeni wakho yokuhlala ngokufaka isicelo sokutshala imali eFrance seyilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zaseFrance.
Lapho isicelo sakho sokuba ngumhlali ngokutshalwa kwezimali eFrance sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eFrance kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi eFrance
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eFrance azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezikhali nezinhlamvu ezivela noma eFrance.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali eFrance ahlinzekelwa ukubhekwa kwezobuchwepheshe eFrance noma ubuhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma ukuya eFrance.
Indawo yokuhlala ngokubonisana nokutshalwa kwezimali eFrance ahlinzekwa nganoma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu eFrance.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali eFrance akukhona okwabantu abasebenza ngezinto ze-Genetic eFrance.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eFrance akuyona eyamabhizinisi asebenza ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi eFrance.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kweFrance akutholakali kubantu baseFrance abasebenza ngokuhweba, ukugcina eFrance, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali eFrance akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo eFrance akuzona ezenkolo namahlelo abo okusiza abantulayo eFrance.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku France ayinikezwanga kubantu abasebenzelana nezithombe zobulili ezingcolile eFrance.
Ukuhlala kwethu abameli eFrance awasekeli ukuhweba ngebhizinisi lokuthengwa kwezidakamizwa eFrance.
“Isaziso Esibalulekile : IMM Solutions INC ithatha ukuqaphela okunengqondo ukucacisa imibhalo ye-AML yamakhasimende eFrance ne-KYC yawo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla eFrance ukuvunywa kwesicelo Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali eFrance.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngokusekelwa kokutshalwa kwezimali eFrance kwezotshalomali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlela izindlu eFrance.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zomthetho zaseFrance, sakha izixazululo ezinhle kakhulu.
I-Residency yethu ngezinsizakalo zokutshala imali eFrance inikela ngamanani ashibhile, ngenani lokuphumelela elingafinyeleleka kangcono eFrance.
Sithathe isipiliyoni seminyaka sokuhlala kabili eFrance sisekela amaklayenti nemindeni yawo eFrance.
Ukuhlala Okuhlangenwe nakho ngabaceli bokutshala imali eFrance kanye nabameli bezomthetho baseFrance abanikeza ukusekelwa kumakhasimende.
Sinabaceli abahle kakhulu kanye nabasebenzeli benqubo yokusingatha iFrance kanye nesicelo abazibophezele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eFrance nangemva kokuvunywa, ilungu lethu leqembu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukusekelwa komuntu eFrance
Sinesipiliyoni samazwe omhlaba e-Residency ngokutshala imali kufaka neFrance, sisiza amaklayenti avela kuwo wonke umhlaba ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali eFrance kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuya eFrance
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende eFrance, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali lwaseFrance nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa eFrance
Inqubo Yemvume Yokusebenza yeFrance
Indawo yokuhlala okwesikhashana eFrance
Indawo yokuhlala unomphela eFrance
Ukuba yisakhamuzi saseFrance
Ama-Embasi nama-Consulates aseFrance
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eFrance nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizihlinzeka eFrance ngezidingo ezisheshayo noma ezizayo.
Uma uhlela ukuhambisa nomndeni wakho uye eFrance ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho weFrance, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nokuthi ungadinga nini eFrance ngamanani aphansi.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana nokutshalwa kwezimali eFrance, sihlinzeka ngamabhizinisi, i-IT kanye nezinsizakalo ze-HR naseFrance, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi baseFrance abasenza isitolo esisodwa seFrance namazwe we-106.
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu ngabanye kanye nosomabhizinisi baseFrance ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali eFrance ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nokubopha eFrance nakwamanye amazwe.
Singakusiza bhalisa inkampani eFrance noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani eFrance zishibhile nathi.)
I-Akhawunti Yasebhange eFrance
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela eFrance uzodinga i-akhawunti yakho yasebhange eFrance ne-akhawunti yasebhange yenkampani eFrance, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Ingabe udinga ukubonisana eFrance, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali eFrance njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech eFrance noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze France uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elivele likhona eFrance ukuqala ngokushesha eFrance.
Izinsizakalo ze-HR eFrance
Our inkampani yezabasebenzi eFrance ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga post izikhala eFrance free.
Izinombolo zefoni ezibonakalayo zeFrance
Izinhlelo zebhizinisi zeFrance kanye ne izinombolo ezibonakalayo zeFrance Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Imisebenzi Yezokuhlela Kwezimali eFrance
Ukubalwa kwezimali, ukukhuthala okufanele eFrance nase okuningi.
Ikheli Lehhovisi Elibonakalayo eFrance
Ukusetha ibhizinisi eFrance
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance, isethaphu ibhizinisi ku France.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi eFrance
Ukwakhiwa Kwewebhu eFrance
Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano eFrance
Ukuthuthukiswa kwewebhu eFrance
Ukuthuthukiswa Kwesoftware eFrance
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eFrance
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni ngokusetshenziswa kwezixazululo ze-Investment eFrance nokuphumelela kwamakhasimende ethu kubaluleke kakhulu, ngoba iFrance, singabaholi, inkampani yethu yezomthetho yaseFrance inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika naseFrance, sinedumela lokuletha okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kwamakhasimende eFrance nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu baseFrance nemindeni yabo. Ukuhlala kwethu ngethimba lokutshala imali eFrance kunikeza izixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala eFrance, lapho imvume yakho yokuhlala eFrance ivunyelwe.
Amandla wommeli waseFrance ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali eFrance. Uma useFrance noma uhlela ukuvakashela eFrance, singathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola iPower of Attorney. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani yeFrance ukude, amandla akho abameli kufanele agunyazwe ngokusemthethweni ukuthi asetshenziswe endaweni yaseFrance. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele ngabe ligcotshwe noma livunyelwe ngokomthetho yihhovisi lenxusa laseFrance.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eFrance
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali eFrance?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala eFrance ngokutshala imali kwezomnotho waseFrance ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, izindlu, izibopho zikahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali eFrance, ukuhlala ngohlelo lokutshala imali eFrance kusekelwa ukuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eFrance, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezotshalomali eFrance, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali eFrance kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali eFrance, abasebenza kakhulu ezindaweni zokuhlala ngabatshali bezimali eFrance, kanye nezinkampani ezihamba phambili zokubonisana nabokufika eFrance.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eFrance | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali eFrance | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment eFrance | Ukuhlala kabusha ngabameli bezotshalomali eFrance | Ukuhlala kabusha ngabacwaningi bokutshala imali eFrance
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngokutshalwa kwezimali eFrance?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali eFrance, kungachazwa njengokuthola ubuzwe baseFrance ngokutshala imali kwezomnotho waseFrance ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, ingcebo, amabhondi kahulumeni, njll eFrance. Faka isicelo sobuzwe ngokutshala imali eFrance, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eFrance olwesekelwa yisakhamuzi ngezinsizakalo zokutshalwa kwezimali eFrance, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezotshalomali eFrance, ubuzwe obuhle ngabameli bezotshalomali eFrance nobuzwe obuhle ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali baseFrance, abasebenza ukuba yisakhamuzi esihle kakhulu ngabenzeli bezimali eFrance, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika eFrance.
Izinsizakalo zokungena kwabatshalizimali ezingabizi eFrance | Abaceli abafinyelelekayo bokufika eFrance | Abameli abangabizi bezimali zabokufika eFrance | Abameli abangabizi bezimali zabokufika eFrance | Ababonisi bezimali abangena mali abangabizi baseFrance | Amafemu omthetho wokufudukela eFrance angabizi
Iyini incazelo yepasipoti yesibili eFrance?
Iphasiphothi yesibili eFrance, ingachazwa ngokuthi, ukuthola izakhamuzi ezisemthethweni zaseFrance ngokutshala imali kwezomnotho waseFrance ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, izindlu, izindlu, amabhizinisi kahulumeni, njll. Faka isicelo sephasiphothi yesibili eya eFrance, uhlelo lwesibili lwephasiphothi lwaseFrance olwesekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili eFrance, ngokusebenzisa abameli bethu besibili abahamba phambili bephasiphothi eFrance, abameli bamapasipoti wesibili abahamba phambili eFrance nabeluleki besibili abahamba phambili bephasiphothi baseFrance, abasebenza kuma-passport wesibili abahamba phambili eFrance, kanye namafemu amahle kakhulu abonisana nabokufika eFrance.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili zeFrance | Abameli bepasipoti besibili eFrance | Abameli bepasipoti besibili eFrance | Abameli bepasipoti besibili eFrance | Abaluleki besibili bepasipoti baseFrance
Iyini incazelo ye-visa yegolide eFrance?
I-visa yegolide eFrance, ingachazwa njengokuthola imvume yokuhlala eFrance ngokutshalwa kwezimali emnothweni waseFrance ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengamabhondi kahulumeni, amabhizinisi, izindlu nomhlaba, njll. Faka isicelo se-visa yegolide eFrance, uhlelo lwegolide lwegolide lweFrance olwesekelwa yi Izinsizakalo ze-visa zegolide zaseFrance, ngokusebenzisa abameli bethu abaphambili be-visa eFrance, abameli abaphambili be-visa eFrance kanye nabeluleki abahamba phambili be-visa baseFrance, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili eFrance, kanye nezinkampani ezihamba phambili zokubonisana nabokufika eFrance.
Izinsizakalo ze-visa zegolide zeFrance | Abameli be-visa basegolide eFrance | Abameli begolden visa eFrance | Abameli begolide begolide eFrance | Ababonisi be-visa begolide baseFrance
Yiluphi utshalomali oluncane lwe-Residency ngokutshalwa kwezimali eFrance?
Ukutshalwa kwemali okuncane kokuhlala ngokutshalwa kwezimali eFrance kungama-EUR 10,000,000.
Ngabe unikeza ukusekelwa kwezomthetho kweFrance kweResidency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu eFrance kanye nabamele eFrance banikela ukwesekwa kwe-Residency ngokutshala imali eFrance.
Ingabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance kubiza?
Izindleko Zokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eFrance kanye ne-Residency ngezidingo zesikhwama sokutshala imali eFrance ngezabantu abaphezulu abanenani elikhulu, sikhokhisa imali yokubonisana kuphela ye-Residency by Investment to France, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi ze-Residency by Investment solutions.
Yiziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance noma nge-visa yabatshalizimali eFrance?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha zimbalwa izibonelo ezokuhlala ngokutshala imali eFrance kusuka e-Asia, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance kusuka e-Afrika, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance kusuka eYurophu, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance kusuka eNingizimu Melika, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eFrance kusuka eMalaysia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eFrance kusuka eBangladesh, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eFrance kusuka e-Indonesia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eFrance kusuka eSri Lanka, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eFrance kusuka eNepal, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eFrance kusuka eNdiya naseResidency ngokutshalwa kwemali eFrance kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali eFrance
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali eFrance
Amagama abalulekile ku-Residency by Investment for France
I-Impots.gouv (iwebhusayithi yeziphathimandla zentela)
Yenza IPlanethi Yethu ibe Nkulu Futhi
Umnyango Wezokubumbana Kwezwe
Ama-visa ama-France (Iwebhusayithi esemthethweni yokufaka isicelo se-visa eFrance)
I-OFII (I-French Immigration and Citizenhip Office)
Umshwalanse we mpilo
I-URSSAF (ihhovisi lokuqoqa iminikelo yezokuphepha)
Khetha Isifunda saseParis
Isikhungo Sikazwelonke Sezinkampani Zangaphandle (CNFE)
I-DIRECCTE (Umqondisi Wezifunda Webhizinisi, Ukuncintisana, Ukusetshenziswa Nokuqashwa)
I-CLEISS (Umhlangano wokuxhumana phakathi kwezikhungo zokuphepha zenhlalo yaseFrance nabanye ozakwabo)
Inkonzo YaseYurophu Nezangaphandle
Ministry of Solidarity Nempilo
Amasiko aseFrance ebhizinisi
Umsebenzi Kahulumeni (Iwebhusayithi Esemthethweni yabaphathi jikelele baseFrance)
Xhumanisa UMnyango Wokufudukela EFrance , obhekene nokwakha izinqubomgomo zokusheshisa Ukuthuthela Kwelinye Izwe eFrance